Umbhiyozo kunye nokuhlala, iikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya - I-Airbnb
Umbhiyozo kunye nokuhlala, iikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguIndira
Malunga nemizuzu eyi-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseKolkata ipropathi yam ingaphakathi kokufikelela okufanelekileyo kwezona zinto zinomtsalane zibalulekileyo esixekweni kwaye inokufikelela ngokulula kwizithuthi zikawonke-wonke.Oritsho kunye netotos ziyafumaneka ezinyaweni zakho. Ixhotyiswe nge-wifi yasimahla, ipropathi ibonelela ngendawo yokuhlala epholileyo kuzo zonke iindwendwe zayo. Unokuziva ngexesha lokuhlala kwakho ukuba sizame konke okusemandleni ethu ukuba uzive usekhaya xa ukude nekhaya. Ukhuselekile kakhulu kwaye ukhululekile ukusebenza omnye inenekazi okanye inenekazi.
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-1000 sq.ft.apartment, enegumbi lokuhlala elikhulu, igumbi lokulala elikhulu elineebhalkhoni ezimbini ezinombono omhle, ikhitshi elinazo zonke izinto eziluncedo, igumbi lokuhlambela ezimbini.Singakwazi ukuhlalisa abantu abayi-4 ngokulula. eyakho, ngaphandle kokwabelana.I-WIFI ekhawulezayo kakhulu yibhonasi. Ngeli xesha lobhubhani kutheni ungahlali ekhaya .Yiba nokutya kwasekhaya.Isibhedlele saseCharnock kunye nesibhedlele saseSpandan phakathi kwemizuzu eli-15 . Ungalungiselela amaqela amancinci ngeendleko ezongezelelweyo.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.94 · Izimvo eziyi-83
Ubumelwane obunoxolo kakhulu .Yonke into yeemfuno zakho zemihla ngemihla iyafumaneka.Uthungelwano olukhulu lonxibelelwano luyakusa kuzo zonke iindawo ezibalulekileyo zaseKolkata.Emva kokugqiba umsebenzi wakho wosuku lonke xa ubuyela kwindlu yakho awuyi kuzisola.
Umbuki zindwendwe ngu- Indira
Mna nomyeni wam siya kuba newonga ngokubakho kwakho emnyango wethu. Umyeni wam ligosa likarhulumente esidla umhlala-phantsi, ubutyebi bolwazi esinalo malunga nommandla wasekhaya ngokuqinisekileyo kuya kuba luncedo ekufumaneni uninzi lotyelelo lwakho!
Ngaphandle koko, ndihlala ndifumaneka ngefowuni yam kunye neposi kuyo nayiphi na imibuzo onokuthi ube nayo.Iindwendwe zinokulindela impendulo ekhawulezileyo.Kubasemzini umyeni wam unokuba sisikhokelo sokuhlola ikona nganye yaseKolkata.
Mna nomyeni wam siya kuba newonga ngokubakho kwakho emnyango wethu. Umyeni wam ligosa likarhulumente esidla umhlala-phantsi, ubutyebi bolwazi esinalo malunga nommandla wasekhaya ng…